Posted on 15/08/19 1:37 by KB Microfinance Myanmar Co., Ltd
Job Start Date: 15.8.2019
Microfinance လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။
ချေးငွေ ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
Branch များမှ ရရှိသော Loan Request များကို ခိုင်မာမှုရှိ / မရှိစိစစ်အကဲဖြတ်ရမည်။
Customers များနှင့် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိူင်ရမည်။
မြောက်ဉက္ကလာပရုံးချုပ်တွင် အင်တာဗျူးလာရောက် ဖြေဆိုနိူင်သူဖြစ်ရပါမည်။
More jobs from KB Microfinance Myanmar Co., Ltd
Internal Audit (ရန်ကုန်)
Posted on 09/10/19 2:49 by Straits Microfinance
Job Title - Internal Audit (M/F)Job Location- YangonRequirementsCan speak EnglishHave above2or3years experience in related field.More preferred experence in MicrofinanceHave knowledge in Micrsoft Word ,Excel,etc.
Credit Control Unit Assistant (ရန်ကုန်)
Posted on 07/10/19 23:16 by SATHAPANA Limited
Position SummaryThe Credit Control Unit is responsible for assisting Credit function in administrating its policy and procedure and assisting in credit risk management, performance management, and staff capacity development. DUTIES AND RESPONSIBILITIES Credit Risk ManagementAssist in development of policies, procedure and guideline in managing lending process on ...
Credit Management Officer (တောင်ငူ၊ သထုံ)
Posted on 10/10/19 1:39 by Myanmar Finance International Limited
လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများဘွဲ့(သို့) ဘွဲ့နှင့်အလားတူသော ဒီပလိုမာတစ်ခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ချေးငွေအရာရှိ အဖြစ် အနည်းဆုံး လုပ်သက် (၂)နှစ်ရှိသူ ၊ အလားတူရာထူးတွင် အတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားများအောက်တွင် လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်အထိလုပ်ကိုင်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ကွန်ပျူတာ အခြေခံတတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွတ်နိူင်သူ၊ ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ရုံးတွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာမှုကောင်းပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။သင်ကြားလေ့လာမှုအားကောင်းသူဖြစ်ရမည်။နယ်ရုံးခွဲများအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းနိူင်သူဖြစ်ရမည်။